Liban: mpanao didy jadona 128 mahery no toherina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2011 17:53 GMT
Raha mbola eo am-panoherana ny mpanao didy jadona any aminy ny tontolo Arabo, dia tsy dia tena mitovy loatra amin'ny an'ny rehetra ny zava-misy any Liban sady somary manahirana. Araka ny voalazan'ny mpikatroka Imad Bazzi sy Ali Fakhry, dia eo ambany fitondran'ny mpanao didy jadona 128 ny vahoaka any Liban, tsy iza izy ireo fa ny mpikambana ao amin'ny parlemanta sy ny mpitondra. Izy ireo mitambatra no nanapa-kevitra tamin'ny 16 febroary lasa teo fa hampiasa ny lalànany amin'ny maha-libaney azy ary nilaza ampahibemaso fa tsy mankasitraka ny fanoherana. Eto no hahitanareo ny vokatr'izany sy ny fanehoan-kevitry ny Libaney an'aterineto nanoloana izany fihetsika izany.
Lapan ny Antenimiera Libaney ao afovoan i Beirota. Sary mpampiasa Flickr antsoina hoe nathanm (CC BY-NC-SA 2.0).
Mialohan'ny nanambarana ny zavatra saika hataon'ireo mpitolona, dia namoaka fanambara i Imad izay nilazany ny zava-misy any Liban sy ny nofinofiny ho amin'ny fiovana satria i Liban dia tsy hafa fa mitovy amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy ihany, Ejipta sy Tonizia. Azavainy izany amin'ny alalan'ireo olana misy ao amin'ny firenena toy ny kolikoly sy ny tsy fahampian'ny fahafahana miteny, fifidianana malalaka, fitoviana ara-tsôsialy, antoka amin'ny fitsaboana, ankoatra ny marobe tsy voatanisa. Kianiny mafy ny mpanao politika amin'ireo lafiny rehetra ireo ary hoy izy:
Ity misy fanontaniana, fahadisoan'iza izany? Ilaina ve ny manao fanadihadihana hoe inona no vita ary iza no nanao azy? Tsy efa mazava ve izany? Tsy ireo mpanao politika lehiben'ny ady sy manao afera mihosin-dra ve no ao andamosin'ny fahapotehan'ny firenena nanomboka tamin'ny taona 1975 ka hatramin'izao? Tsy ireo ve no maka ny zontsika, na amin'ny alalan'ny vola izany na amin'ny alalan'ny fanakanana fanaovana hetsika demokratika?
Tamin'ny 16 febroary, Imad izay nitonon-tena ho mpitoraka bilaogy amin'ny fotoana rehetra, sy ilay mpikatroka miaraka aminy Ali Fakhy no nanapa-kevitra hanambara ny fanoherany ny fitondrana ka namakivaky ny lapan'ny parlemanta ao afovoan'i Beirota sady nilanja sora-baventy nanao hoe: “mpanao didy jadona iray no tany Ejipta, ny antsika kosa 128″ sy ny hoe “Irin'ny vahoaka ny hanonganana ny fitondrana” amin'ny teny arabo. Vetivety teo dia nifanehatra tamin'ny polisy izy ireo ka nampitahoriny, nosintoniny ny sora-baventy teny aminy ary nofafany ny sary tao anatin'ny fakantsary teny an-tanany.
Nizara teo anelanelan'ny hevitra roa ny tontolon'ny mpiserasera twitter libanais dia ny nankasitraka ny hetsika sy ny nihomehy satria araka ny filazan'izy ireo dia sady fialamboly ilay izy no nilaina koa.
Indreto ny sasany amin'ireo tweets:
@Emiliehasrouty:@TrellaLB tena nahafinaritra ny nataonareo, maro taminay no nijanona fotsiny teo anoloan'ny solosaina niaraka tamin'ny kafe, nafana sady nilamina tsara… Mankasitraka… & #Saba7o 🙂
@maheriskandar: #feb16 Tsy fahadalana izany! Rehefa tsy mahita asa ianao, mividiana trano, eritrereto hoe misy herinaratra 24/24, ary manohitra ny fitondrana: FANOHERANA
@LebaneseVoices: #feb16 Tsy mila big bang vao afaka maneho ny mahaizy azy. Ny tena mangetaheta fiovana kanefa tsy sahy manandrana akory.
Manana fomba fijery hafa kosa ny sasany:
@footnem: Ataoko fa #Feb16 dia andrana fotsiny nataon'i @TrellaLB hivoaka ho vaovao @ghonim
@FadyRoumieh: ho anareo rehetra mihevitra ny tenanareo fa eo an-kianjan'ny maritiora androany – eritrereto ihany. Avy ny orana, tsy afaka mihitsy ianareo, averiko indray, tsy afaka hilalao afo!
@footnem: tsy fanoherana an'olon-tokana izy ity 3erif RT @sam_lb: Tahaka ny fanoherana an'olon-tokana ihany… Tahaka ny hoe olona iray ihany nomahay azy#Feb16
Ny andro manaraka, Imad namoaka lahatsoratra [Ar] ao amin'ny bilaoginy Trella mikasika ny zava-mitranga rehetra, izay nofintininy tahaka izao:
Teny farany, tsy misy dikany ny fanehoan-kevitra tamin'izay rehetra efa niseho. Tsy olana ny fanohananareo na ny fanoheranareo ny zava-nitranga. Ary isaorako be dia be ianareo satria tsapanareo ny tanjona kendrentsika amin'izao hetsika izao. Na miresaka zavatra mampihomehy tsy misy dikany ianareo na manohana, tsy misy dikany izany. Ny tena zava-dehibe dia ny firesahanareo ny zava-misy ary izay indrindra no nokendrena. Tontosa ny iraka.
Inona no tena ilan'ny vahoaka Libaney hanohitra ny fitondrana? Afaka jerenao ao amin'ny rohy #UniteLB ao amin'ny twitter ohatra ny zavatra tadiavin'ny vahoaka Libaney ankehitriny.